Ukuthembeka Nokuphepha ku-Airbnb - Ukuphepha kwakho kubalulekile kithi
Ukuphepha kwakho kuza kuqala kithi
Kunoma ibuphi ubusuku obunikiwe, abantu abayizigidi ezi-2 bahlala emakhaya e-Airbnb emadolobheni angu-100 000 kuwo wonke umhlaba. Kukhona ukufakwa kwezigidi ezingaphezu kwezigidi ezingu-6 emazweni angu-191 ongakhetha kuwo—okungaphezu kwezingqimba ezinhlanu zehhotela zihlangene.
Yini eyenza konke lokho kwenzeke? Themba.
I-Airbnb iklanywe ngokuphepha—kabili kwi-intanethi nangaphandle—engqondweni
Konke ukubhukha kwe-Airbnb kuyakalwa kulinganiswe ngokobungozi ngaphambi kokuqinisekisa. Sisebenzisa indlela yokuhlaziya esitshela izinto kusengaphambili kanye nokufunda komshini ukuze sibheke ngokushesha izimpawu ezingamakhulu ngamakhulu ezisisiza ukuba siphawule futhi siphenye ngokuthile okusolisayo ngaphambi kokuba kwenzeke.
Ukuhlola uhlu lokubuka nemuva lomuntu
Yize lungekho uhlelo lokuhlunga olungenaphutha, emhlabeni wonke sisebenzisa uhlu lokubuka ukuze sihlole ababungazi nezivakashi ngokuqondene nemithetho, ubuphekula nonswinyo. Ngokuqondene nababungazi nezivakashi e-United States, sihlola imvelaphi ngomuntu.
Senza ama-workshop ezokuphepha nababungazi kanye nabochwepheshe bendawo abahamba phambili futhi sihlinzeke izivakashi ngemininingwane yasendaweni ebalulekile. Siphinde sinike noma yimuphi umbungazi i-detector yentuthu nekhabhonimonoksayidi mahhala ekhaya lakhe uma eyifuna.
Ipulatifomu yethu ephephile iqinisekisa ukuthi imali yakho iyafika kumbungazi—yingakho sikucela ukuba ukhokhe njalo nge-Airbnb futhi ungalokothi ufake imali noma ukhokhele umuntu ngqo.
Sisebenzisa izindlela eziningi zokuvikela i-akhawunti yakho ye-Airbnb, njengokudingeka kwezinto eziningi zokuqinisekisa uma kukhona ozama ukungena ku-akhawunti yakho ngokusebenzisa ifoni entsha noma ikhompyutha entsha futhi sixwayise nokukuxwayisa uma kwenziwa izinguquko ezithile kuyona.
Khokha futhi ukhulume njalo ngokuqondile kuwebhusayithi ye-Airbnb noma i-app. Uma nje uhlala ku-Airbnb kuyo yonke iphrosesi—ekukhulumisaneni, ekubhukeni, ekukhokhweni—uvikelekilwe isu lethu lokuzivikela okungahleliwe.
Yazi okufanele ukulindele
Senza kube lula ngawe ukwazi okwengeziwe nganoma yiliphi ikhaya, okokuzithokozisa, isivakashi, noma umbungazi ngaphambi kokubhukha
Wonke umuntu ku-Airbnb unephrofayili yokusiza ezinye izivakashi noma ababngazi ukuthi bazane. Ukuze ubhukhe noma ukubungaza, uzocelwa ukuba unikeze i-Airbnb ngegama lakho eligcwele, usuku lokuzalwa, inombolo yocingo, imniningwane yokukhokha, nekheli le-imeyili.
Ithuluzi lethu lokuthumela imiyalezo elivikelekile likuvumela ukuba wazi umbungazi noma isivakashi futhi ubuze imibuzo mayelana nendlu noma ngokokuzithokozisa ngaphambi kwesikhathi. Ngemva kokubhukha, ungalisebenzisa ukuze nithumelelane imilayezo kalula ngenhloso yokuhlela izinto ezifana nokufika kwezivakashi kanye nokudlulisa imiyalelo.
Okushiwo abanye ngawe
Uma unesifiso sokwazi ukuthi abanye bacabangani ngesivakashi esingase sihlale endlini yakho, ngombungazi, ngekhaya noma ngokokuzithokozisa, okumelwe ukwenze ukubheka okushiwo abanye. Izivakashi nababungazi bangaphawula basho okuthile ngomunye nomunye ngemva kokubhukha, ngakho uyazi ukuthi impendulo oyibonayo isekelwe kulokho ababhekane nakho ngempela.
Silapha uma usidinga
Iqembu lethu lomhlaba wonke limi ngomumo ubusuku nemini ngezilimi ezahlukahlukene ezingu-11 ukuze lisize ekulungiseni izinto ngosizo lokubhukha kabusha, ukubuyiselwa kwemali, ukukhokhelwa Isiqiniseko Sombungaziesisezingeni eliphezulu, nezinhlelo zomshuwalenze zako kokubili amakhaya kanye nokokuzithokozisa .
Mane nje uxhumane nathi uma kukhona okudingayo.
Noma, thola izimpendulo zanoma yini oyidingayo ku-Help Center yethu.
Ngingazi kanjani ukuthi indlu iyatholakala?
Ngingakubhukha kanjani okokuzithokozisa?
Kusebenza kanjani ukusho okuthile ngombungazi noma ngesivakashi emva kokuvakasha?
Ngiyibheka futhi ngiyithumele kanjani imilayezo?
Ngingayifaka kanjani indlu ku-Airbnb?
Ngikufaka kanjani okokuzithokozisa?
Futhi okuningi kakhulu.